Tombontsoa any ambanivohitr'i Baltimore
Etazonia Maryland Baltimore
Aiza no hipetrahana any amin'ny Faritra Baltimore
Raha mieritreritra ny hifindra monina any Baltimore ianao , ny iray amin'ireo asa voalohany dia manapa-kevitra ny hiaina ao an-tanàn-dehibe na ambanivohitra.
Ny tanànan'i Baltimore, misy mponina 635 815 ao amin'ny Census 2000, dia eo afovoan'ny faritra.
Ny County Baltimore dia manodidina ny tanàna amin'ny lafiny rehetra, afa-tsy any atsimo. Amin'ny 786 113 ny isan'ny mponina, maherin'ny 150.000 ny mponina.
Na dia matetika ny teny hoe "The County" aza dia midika hoe any amin'ny faritr'i Baltimore, indraindray dia ampiasaina amin'ny "tanàna ambanivohitra", na dia misy faritra maro hafa ao amin'ny faritra aza.
Ny faritra sasany akaiky dia misy:
Ny faritr'i Anne Arundel - atsimo sy atsinanan'i Baltimore, dia misy an'i Annapolis
Carroll County - avaratrandrefan'i Baltimore County
Harford County - avaratra atsinanan'i Baltimore County
County Howard - atsimoandrefan'i Baltimore County
Matetika ny mponina any Baltimore no mivezivezy kokoa noho izy ireo manakaiky ny foibe afovoan-tanàna ary matetika izy ireo dia mety tsy handehandeha eny amin'ny làlambe. Na raha miasa any ambanivohitra izy ireo dia tsy dia lavitra loatra amin'ny fifamoivoizana.
Ny ankabeazan'ny faritra manintona indrindra any amin'ny faritra, sekoly tsy miankina, oniversite, hopitaly, tranombakoka ary ivotoerana ara-kolontsaina dia ao an-tanàna.
Ny trano fisakafoanana, fivarotana sy serivisy dia akaiky kokoa ny toerana fonenana ao an-tanàna, izay manamaivana ny filana fiara.
Ny safidy fisakafoanana sy ny fiainana an-davanandro dia maro karazana, ary misy ny trano fisakafoanana tsy dia lavitra loatra
Misy karazana trano fonenana isan-karazany. Ny manodidina ny rano - toy ny Inner Harbor , Kanton , Fells Point , Hill, Federal Reserve, Butchers Hill ary Patterson Park - dia manana trano fanamboarana, trano fonenana ary trano fonenana. Ny faritra avaratra toa an'i Roland Park, Mayfield, Beverly Hills ary ny Tendrombohitra Washington dia manana karazana tranom-pivelomana malalaka amin'ny kianja.
Ny mponina ao an-tanàn-dehibe dia manakaiky kokoa safidy maro amin'ny fitateram-bahoaka.
Ny trano dia kely kokoa sy lehibe ary matetika tsy misy an-tokontany.
Ny fiara dia miteraka olana amin'ny tanàna sasany. Ao amin'ireo faritra tarihin'ny trano fanamboarana trano, ny ankamaroan'ny trano dia tsy manana fiara an-dalambe eny an-dalambe ary ireo izay mandany vola bebe kokoa.
Ny heloka bevava sy ny tahan'ny fahantrana dia ambony kokoa any Baltimore City.
Mety tsy dia azo itokisana loatra ny serivisy.
Ny sekolim-panjakana maro dia anisan'ny asa ambany indrindra eo amin'ny fanjakana.
Ireo trano fandrobàna dia mihamitombo kokoa sy vao haingana ary manana toerana maitso maitso.
Ny karazam-pifaneraserana eo amin'ny fiarahamonina dia samy hafa. Anisan'ireo safidy manan-tantara toy ny tanàna, ny fivoaran'ny trano vaovao sy ny fiainana ambanivohitra dia anisan'ireo safidy.
Maro ny sekoly ivezivezin'ny sekoly ambaratonga ambony-manatanteraka ny mpiara-monina an-drenivohitra amin'ny fitsapana voaomana.
Mora kokoa ny manodidina ny manodidina.
Safidy maromaro no azo ampiasaina amin'ny fitateram-bahoaka.
Tsara kokoa amin'ny toeram-pivarotana sy toeram-pivarotana lehibe.
Ny fifamoivoizana sy ny fifamoivoizana dia olana goavana, indrindra any amin'ny faritra misy toeram-pivarotana maro sy birao. Afaka mandeha lavitra sy mandroso ny fiara amin'ny fiara amin'ny fiara.
Ny fivoarana haingana tany amin'ireo tanàna dia nametraka lozam-pifamoivoizana teo amin'ny sekoly sy ny sampan-draharaha sasantsasany tao amin'ny faritra sasany.
Vitsy ny karazana fivarotana sy trano fisakafoanana. Ny chains no fitsipika, ary ny mahaleotena no maningana.
Live Baltimore dia fikambanana iray natao hanandratra ny fiainana an-tanàna. Ny tranonkala dia manana loharanom-baovao mahasoa ho an'ireo vao tonga any amin'ilay faritra. Rehefa naverinao tamin'ny safidy vitsivitsy izy ireo, jereo ny loharanon-kevitra momba ny fonenana na fividianana .
Live Baltimore dia fikambanana iray natao hanandratra ny fiainana an-tanàna. Ny tranonkala dia manana loharanom-baovao mahasoa ho an'ireo vao tonga any amin'ilay faritra. Rehefa naverinao tamin'ny safidy vitsivitsy izy ireo, jereo ireo loharanon-kevitra ireo mba hividianana na hividy .
Top Attractions Attractions in Baltimore
Kalandrie ho an'ny sekolim-panjakana any Baltimore City
Baltimore ny 4 Jolay Fireworks and Events
Downtown Baltimore: zavatra hatao any amin'ny Inner Harbor
Diaben'ny Fahatsiarovana 2010 tany Baltimore
Roller Skating Mitsangana eny amin'ny faritra Washington, DC
Fahatsiarovana sy zava-nitranga tao Milan, Italia
Ny Big Chicago 10: Bars ny Whiskey
Pointe isan-karazany ny mpizara Winemaker
Tetezam-potoana fitetezam-potoan'ny talking Stick Resort
Ziona Weather, Festivals and Events in Florida
Jereo ny Ghost Ranch an'ny Georgia O'Keeffe
7 Fahadisoana tsy tokony hatao rehefa mianatra any an-tany hafa
Top 10 Montreal Costumes Shops
Queen Mary Dinner sy Ghost Tour
Top 10 Washington, DC Dance Clubs
Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny espaniola
Ahoana no fomba hilalao an'i Nice ao amin'ny Caribbean Nudist Resort